यौंनका लागि उचित समय राति कि बिहान ? कारणसहित | नेपालन्युज
यौंनका लागि उचित समय राति कि बिहान ? कारणसहित
आफ्नो पार्टनरसँग यौंन सम्पर्क गर्न उचित समय कुन हो ? रातिको समयमा सम्पर्क गर्द उचित हुन्छ वा विहानको समयमा ? एक अध्ययनले अहिले रातिको समयभन्दा विहानको समयमा उचित हुने देखाएको छ । विहानीको समयमा यौन सम्पर्क गर्नाले मुटु स्वास्थ्य राम्रो हुनुका साथै शरीरको प्रतिरोधात्मक शक्ति पनि बढाउँछ ।